Scrolla Izindaba | Page 373
Yenzani izingane eziningi, i-China itshela isizwe
Scrolla Africa - 1st Jun 2021 0
Ekushintsheni inqubomgomo eqopha umlando, i-China isimemezele ukuthi izovumela izithandani ukuba zibe nezingane ezintathu, isuke kulezi ezimbili ezazivunyelwe phambilini.
U-Eugene we-Trompies ukhethe umngcwabo kaMjokes ukuhlasela iminyango yezobuCiko baseNingizimu Afrika
Umngcwabo welungu leqembu le-Kwaito u-Emmanuel "Mjokes" Matsane ububanjwe ngoMgqibelo, kanti bekungewona umngcwabo othule futhi odabukisa kakhulu wonke umuntu abewulindele.
Umculi we-Gospel ukhiphe i-albhamu
UThuso Mojatau, ozibiza ngomculi we-gospel ehlukile, ukhiphe i-albhamu yakhe yokuqala, umzamo wobuciko wokuchaza ukuqonda kwakhe inkolo ngamazwi ezingoma zakhe.
Kuzoba ngokokuqala ngqa: impilo ngaphandle kukaGavin Hunt
IKaizer Chiefs izongena enkundleni ngoLwesithathu okokuqala ngqa selokhu kuxoshwe umqeqeshi uGavin Hunt ngoLwesihlanu olwedlule.
Lifezekile iphupho likaMaswanganyi lokungenela imidlalo yama-Olimpiki
Lokho okwake kwaba yiphupho elikude lomuzwa kumgijimi waseNingizimu Afrika, uPhathutshedzo Shaun Maswanganyi, selifezekile kulandela ukungena kwakhe kuma-Olimpiki ase-Tokyo e-Japan.
Iqembu alisenalo ithemba kimi – kusho uZidane
UZinedine Zidane uchaze ukusula kwakhe esikhundleni njengomqeqeshi weReal Madrid encwadini ayibhalele abalandeli.
Ngabe impilo yakhe njengomdlwenguli iqale eneminyaka eyishumi nantathu?
Scrolla Africa - 31st May 2021 0
Uma etholwa enecala, uTshepiso Mabelane engaba ngumdlwenguli omncane kunabo bonke ezweni.
I-Gauteng isengozini enkulu yegagasi lesithathu – kusho uSolwazi uFrancois
I-Gauteng isengozini yegagasi lesithathu elibi, njengoba amacala enyuka aya ngaphezu kwezi-2 000 nsuku zonke esifundazweni kuphela.
1...372373374...544Page 373 of 544